Sheekh Caan ah Caruurtiisa iyo Xaaskiisa Oo ku Shahiiday Duqeyn ka dhacday wadanka Liibiya [Sawirro].
Dhagayso: Sheekh Abuu Muscab Oo Ka Warbixiyay Howlgalladii Ugu Dambeeyay.
Dr. Xanafi "Maadaama Uu Cudurka Ebola Ku Fiday Ugada Waa In Soomaalidu Ka Digtoonaataa" [Dhageyso].
Qaraxyo Khasaara dhaliyay oo ka dhacay Qansaxdheere iyo Erygay lagu dilay Afgooye.
Xuuthiyiinta oo markale duqeeyay garoomo diyaaradeed oo kuyaal Wadanka Sacuudiga.
Khasaaraha ka dhashay qaraxyadii Muqdisho oo gaaray 31 dhimasho ah.
Al Shabaab Oo Weerar lagu dilay ugu yaraan 11 Askari Kenyaan ah ka fulisay Gobolka Wajeer.
Monday June 11, 2018 - 12:04:14 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Liibiya ayaa ku waramaya in duqeyn ka dhacday magaalada Darna ee wadankaasi ay ku shahiideen tiro culimo mujaahidiin ah iyo xubnaha qoys muhaajiriin ah oo ku sugnaa halkaas.
Sheekh Cumar Rifaaci Saruur oo uu dhalay sheekha caanka ah ee Rifaaci Saruur, kuna dhintay wadanka Masar, ayaa kamid ah dadka ku shahiiday duqeyntan ay fuliyeen diyaaradaha Masar iyo Imaaraatka oo taageeraya malleeshiyaadka Khaliifa Xaftar.
Sheekh Cumar waxaa la shahiiday Xaaskiisa, iyo shan caruur ah oo uu dhalay, waxaana sidoo kale dadka shahiiday ku jira Sheekh Abii Cumar Cabdi-Salaam Al-cawaami, iyo Sheekh Abii Zeyd.
Sheekh Dr Haani As-subaaci oo kamid ah culimada muslimiinta, islamarkaana si dhow u garanayay Sheekh Cumar Rifaaci ayaa qoraal uu ku daabacay bartiisa Telegramka wuxuu ku xaqiijiyay istish-haadka ragan, isagoona dusha kaga tuuray mas’uuliyada dilkooda dowladaha Masar iyo Imaaraatka.
Sheekh Cumar Rifaaci ayaa kamid ahaa mujaahidiinta ka howlgala wadanka Liibiya, wuxuuna qaadi ka ahaa magaalada Darna ee uu ku shahiiday.
8 sano oo xiriir ah ayuu ku xirnaa xabsiyada dowladda Masar, xilligii uu talada wadankaas hayay Xusni Mubaarak, balse waxa uu xurriyadiisa helay 2011-ka, kolkaas oo wadanka Masar ay ka socdeen banaanbaxyo waaweyn.
Markii uu xabsiga kasoo baxay kadib wuxuu soo aaday wadanka Liibiya, halkaas oo uu kaga qeybgalayay dagaallada Jihaadka ah.
Aabaha dhalay Sheekh Cumar waxaa lagu magacaabaa Sheekh Rifaaci Saruur, waana culimada caanka ka ahaa caalamka islaamka si gaar ah Masar, sanadkii 2012-ka ayuu ku dhintay wadanka Masar, waxaana isaga qudhiisa uu sanado dheer uu ku xirnaa xabsiyada dowladda Masar xilliyadii Anwar Saadaat iyo Jamaal Cabdi-Naasir.
Magaalada Darna ayaa wajaheysa go’doon adag oo ay kusoo rogeen malleeshiyaadka Khaliifa Xaftar, kuwaas oo doonaya iney gudaha u galaan magaalada, balse waxaa hortaagan ciidamada mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta oo iskaashanaya.
Taliban oo dhu hor leh ka qabsatay Afghanistan iyo Sarkaal sare oo ay dishay [Sawirro].
Kooxda Xuuthiyiinta Oo Sawaariikh Casri ah ku duqeysay garoon kuyaal Wadanka Sacuudiga.
Weerar 95 qof lagu dilay oo ka dhacay Bartamaha Wadanka Maali.
Dhageyso: Beesha Garre oo ka hadashay duqeyntii uu Mareykanku ku dilay Ibraahim Cabdi Gaab.
Mid Kamida Gobollada Wadanka Ciraaq oo noqday Meesha Ugu Kulul Caalamka.
Mareykanka oo qof Shacab ah ku dilay duqeyn ka dhacday deegaan katirsan Shabeelaha Hoose.
Dhageyso: Muxaadaro Ku Saabsan Fadliga 10-ka Dambe Ee Bisha Ramadaan waxaa Jeedinaya Sheekh Fu'aad.
Sidee usoomaan Muslimiinta ku nool Wadanka Boosniya? [Dhageyso Warbixin].
09/06/2019 - 21:00:33
Daawo Sawirro: Mahrajaan loogu dabaal degayay Munaasabadda Ciidda oo ka dhacay Magaalada Ceelbuur.
05/06/2019 - 21:33:42
Sawirro: Magaalada Jilib oo si heer sare ah looga oogay Munaasabadda Ciiddul Fidriga.
04/06/2019 - 19:14:44
Sawirro: Magaalada Saakoow looga dabaal degay Munaasabadda Ciidul Fidriga.
04/06/2019 - 19:13:44
Sawirro: Hey'adda Al-Ixsaan oo in Ka Badan 2200 oo Qoys Raashin Ugu Qeybisay deegaanno katirsan Sh/Hoose.
03/06/2019 - 17:29:05
Sawirro: Tartanka Qur'aanka Dadka Waaweyn ee Wilaayaatka Islaamiga ah oo lasoo gaba gabeeyay.
27/05/2019 - 13:30:50
Sawirro+Codad: Beesha Biyamaal iyo Al Shabaab Oo Heshiis Buuxa ka gaaray Colaaddii Sh/Hoose.
07/05/2019 - 09:23:33